Ch 2 Asan'ny Apostoly – 2trondro
Home / Baiboly / Asan'ny Apostoly / Ch 2 Asan'ny Apostoly
2:1 Ary rehefa tapitra ny andro Pentekosta no vita, izy rehetra miaraka ao amin'ny toerana iray ihany.
2:2 ary tampoka, nisy feo tonga avy tany an-danitra, toy ny rivotra manatona-keriny, ka nanenika ny trano iray manontolo niangonany.
2:3 Ary niseho taminy misaraka fiteny, toy ny afo, izay nanorim-ponenana rehetra isan-olona azy.
2:4 Ary izy rehetra feno ny Fanahy Masina. Ary nanomboka niteny tamin'ny fiteny samihafa, araka ny Fanahy Masina nomena fahaiza-miteny ho azy ireo.
2:5 Ary nisy Jiosy, mitoetra any Jerosalema, mpivavaka ny olona avy amin'ny firenena rehetra eny ambanin'ny lanitra.
2:6 Ary nony re izany feo nitranga, niangona ny olona maro ka sahiran-tsaina ao an-tsaina, satria samy efa nihaino azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy.
2:7 Ary talanjona avokoa, ka gaga, nanao hoe:: "Indro, tsy rehetra ny amin'ny olona miteny Galiliana?
2:8 Ary ahoana moa no efa samy nandre azy isika teny, ho any izay naterany?
2:9 Dia Partiana sy Mediana sy Elamita, ary ireo izay mponina Mesopotamia, Jodia sy Kapadokia, Ponto sy Asia,
2:10 Frygia sy Pamfylia, Egypta sy ny tany Libya izay manodidina an'i Kyrena izay, ary vao tonga ny Romana,
2:11 toy izany koa ny Jiosy sy ny olona vao niova fo, Cretans sy ny Arabo: efa nandre ireo miteny amin'ny fiteny manokana ny fahagagana 'Andriamanitra. "
2:12 Ary talanjona avokoa izy rehetra, ka gaga, nanao hoe: niresaka: "Fa inona no dikan'izany?"
2:13 Nefa ny sasany kosa maneso hoe:, "Ireo lehilahy ireo dia feno divay vaovao."
2:14 fa Petera, nitsangana ny iraika ambin'ny folo lahy, dia nanandra-peo, Ary Izy niteny taminy: "Ry lehilahy Jodia, ary ireo rehetra izay mitoetra any Jerosalema, aoka ho fantatrareo aminareo, ary atongilano ny sofinareo amin'ny teniko.
2:15 Fa ireo lehilahy ireo dia tsy mamo, rehefa heverinareo, fa vao ora fahatelo ihany izao ny andro.
2:16 Fa izao no ilay nampilazaina an'i Joela mpaminany hoe:
2:17 'Ary izao no ho: amin'ny andro farany, hoy Jehovah, Sitrapoko anie no hatao ho an'ny, avy ny Fanahiko, amin'ny nofo rehetra. Ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo haminany. Ary ny tanora hahita fahitana, ary ny anti-panahy hanonofy.
2:18 Ary azo antoka fa, eo amin 'ny lehilahy sy ny vehivavy mpanompony tamin'izany andro izany, No handatsahako ny Fanahiko amin'ny, Ka dia haminany izy.
2:19 Ary Izaho hanome fahagagana eny amin'ny lanitra ambony, sy famantarana amin'ny tany ambany: ra sy afo ary zavon'ny setroka ny.
2:20 Ny masoandro hampodina ho aizina, ary ny volana ho ra, eo anatrehan'ny lehibe sy miseho andron'i Jehovah, tonga.
2:21 Ary izao no ho: na iza na iza no mangataka ny anaran'i Jehovah no hovonjena. '
2:22 Ry lehilahy Isiraely, mihainoa izao teny izao: Jesosy avy any Nazareta no olona nohamafisin'ny Andriamanitra teo aminareo ny famantarana sy ny fahagagana ary ny famantarana izay vita amin'ny alalany eo aminareo, tahaka ny fantatrareo ihany koa.
2:23 io lehilahy io,, ambanin'ny raikitra drafitra sy ny fahalalana rahateo, izay an'Andriamanitra, dia natolotra araka ny tanan 'ny tsy ara-drariny, ory, ary novonoina ho faty.
2:24 Ary Izay nanangana efa nanapatapaka ny famatoram-Hell, fa sarotra tokoa ho azy mba hohazonina Izy.
2:25 Fa hoy Davida momba azy: 'Nijery an'i Jehovah mandrakariva eo imasoko, Fa Izy dia eo an-kavanako, ka mba tsy hangozohozo.
2:26 Noho io, dia faly ny foko, ary ny lelako efa niravoravoan'ny. Koa, nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana.
2:27 Fa tsy ho foinao ho any amin'ny helo ny fanahiko, na no hamela ny Iray Masinao ho latsaka ao amin'ny lavaka.
2:28 Efa Nampahafantatra ahy ny lalan'aina. Ho tanteraka hameno ahy fifaliana amin'ny fanatrehanao. '
2:29 Noble rahalahy, avelao aho hiteny aminao maimaim-poana momba ny amin'i Davida patriarka: fa nandalo izy ka nalevina, ary ny fasany eto amintsika, na dia mandraka androany.
2:30 Noho izany, izy dia mpaminany, satria fantany fa Andriamanitra no nianiana taminy momba ny vokatry ny valahany, momba ny iray izay no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany.
2:31 nahita rahateo izany, dia niresaka momba ny fitsanganan'i Kristy. Fa izy dia tsy tavela any amin'ny helo, ary ny nofony tsy tratry ny lò.
2:32 izany Jesosy, Andriamanitra nanangana indray, Eny, araka izany vavolombelon'izany izahay rehetra.
2:33 Noho izany, satria nasandratra ho eo ankavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra, ary nandray tamin'ny Ray ny teny fikasana ny amin'ny Fanahy Masina, dia nampidina izany avy, toy ny anao izao hitanareo sy renareo.
2:34 Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra. Fa izy manao hoe:: 'Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana,
2:35 Ambara ho ny fitoeran-tongotrao ny fahavalonao. '
2:36 Noho izany, Mety ho ny mpianakavin 'i Isiraely iray manontolo mahalala tokoa fa Andriamanitra no efa nanao izany iny Jesosy, izay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana, ho Tompo sy Kristy. "
2:37 Ary rehefa nandre izany, izy ireo manenina am-po, ka hoy izy ireo tamin'i Petera sy ilay Apôstôly: "Inona no tokony hataontsika, rahalahy mendri-kaja?"
2:38 Na izany aza tena, Petera hoy izy taminy: "Ataovy fivalozana; ary aoka hatao batisa, ianareo tsirairay avy, amin 'ny anaran' i Jesoa Kristy, ho famelana ny fahotanareo. Ary ianareo dia handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina.
2:39 Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanany, sy ho an'ny rehetra izay lavitra: fa na zovy na zovy Jehovah Andriamanitsika dia efa hoe. "
2:40 Ary avy eo, amin'ny teny hafa dia maro indrindra, dia nanambara sy nananatra azy izy, nanao hoe:, "Aoka hovonjena ho afaka amin'ity taranaka ratsy fitondran-tena."
2:41 Noho izany, ireo izay nanaiky ny lahateny natao batisa. Ary tokony ho telo arivo no olona vao nanampy tamin'izany andro izany.
2:42 Ary izy ireo maharitra ao amin'ny fampianaran'i ny Apôstôly, ary amin'ny firaisana amin'ny famakiana ny mofo, sy ny vavaka.
2:43 Dia raiki-tahotra ny olona rehetra nitranga in. koa, fahagagana sy famantarana maro no vita nataon'ny Apostoly tao Jerosalema. Ary nisy tahotra amin'ny olona rehetra.
2:44 Ary avy eo izay rehetra nino dia niray toerana, ka dia nanao ny zava-drehetra iombonana.
2:45 Izy ireo dia nivarotra ny taniny sy ny fananany, ka nampisaraka azy ireo rehetra, toy ny misy azy ireo efa mila.
2:46 koa, izy ireo nanohy, isan'andro, mba ho iray araka an-kianjan'ny tempoly sy hamaky mofo izahay teo anivon 'ny trano; Ary naka ny sakafo Koa amin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po,
2:47 nidera an'Andriamanitra indrindra, ary mitana fitia tamin'ny vahoaka rehetra. Ary isan'andro, ny Tompo ireo izay nitombo ho voavonjy ao aminy.